août 2018 - Page 3 sur 87 -
Jean Max Rakotomamonjy : Sady kandidà no filohan’ny antenimiera
Tsy isan’ireo tafiditra anatin’ny mpiasam-panjakana ambony ny toeran’ny filohan’ny antenimieram-pirenena, io no fanazavana izay nentin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Resa-be nanomboka ny herinandro teo ny tokony hametrahan’i Jean Max Rakotomamonjy fialana tsy ho filohan’ny …Tohiny
Andilamena : Hofoanana ny dahalo
Isan’ny faritra hanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra Alaotra Mangoro, indrindra ny distrikan’Andilamena sy ny manodidina. Isan’ireny ny fanafihan-dahalo sy ny fanafihana tokantranon’olona, ny fakana an-keriny izay zary lasa mampiraviravy tanana ny mponina eo amin’ny fanatanterahana …Tohiny
« Mendrika fiainana tsaratsara kokoa ny Malagasy », hoy ilay « putschiste » tany Antanifotsy. Ny karazan’olona toa itony Andry Rajoelina itony no antsoina hoe: “lany henatra”. Tena sahin’ity “putschiste” lany henatra ity ve ny …Tohiny
Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana : Mitazam-potsiny ny Praiminisitra
Tsy re feo mihitsy ny lehiben’ny Governemanta manoloana tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana ankehitriny.Sa efa tsara mpiambina ka tsy miaina ny tahotra sy ny horohoro iainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao? Iaraha-mahita anefa fa feno habibiana …Tohiny
Tsy misy sy manam-piovana hatramin’izay hatramin’izao ingahy Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-dia aminy. Omaly mantsy ny fitsarana ny raharaha mahakasika ny fitorian’ny AV7 an’ity Filoha teo aloha ity, sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara ...Tohiny
Mpandraharaha ara-toekarena : Resy lahatra amin’ny programan-dRavalomanana